Isifunda saseTanning saseFlorence - Isikhumba se-Pisa Pelle Italian
Isifunda saseTanning saseFlorence
Isifunda sezikhumba nezinyawo eTuscany singukubaluleka kwamazwe omhlaba, ubuhle bokwenziwa e-Italy, okwenze ukuba sizwe kahle ebunzimeni bezomnotho, kuqinisekisa ukuqashwa. UFlorence ugxile ezimpahleni zesikhumba zokunethezeka futhi ngenxa yalokhu, unqobile inselelo!
Isifunda sempahla yokunethezeka yesikhumba
Isifunda saseFlorentine sikhethekile ezimpahleni zesikhumba zikanokusho. Kuyisifunda esihle kakhulu, esiveza bonke ubuciko kanye nezinqubo zezimboni futhi esikwazile ukuqhubekela phambili esibucayi.
Icaphuna imininingwane eshicilelwe ngu-Il Sole 24 Ore (umthombo: Centro Studi IntesaSanpaolo), phakathi kwezifunda ezingama-20 ezinamandla kakhulu zokukhula kwevolumu, umkhakha wezempahla yesikhumba osezingeni eliphezulu esifundeni saseFlorence umi futhi ungaphezulu kwakho konke ukukhiqizwa okukhethekile izindawo e-Italy: ukuthekelisa okuthethwe ngamabhiliyoni angama-3.8 ngonyaka we-2017, kucishe kwaphindeka kabili kusuka ngonyaka we-2008. Umphumela wezinga elitholwayo wabongwa ngomsebenzi wezo zombili izimboni zabanikazi abakhulu kanye nosonkontileka.
Izimpahla zesikhumba zikanokusho zakule ndawo zaseFlorentine zikhiqiza izikhwama namawallet omkhiqizo owaziwa kakhulu emhlabeni: iGucci, Prada, Dolce & Gabbana, Bulgari, Ferragamo, Fendi, Tiffany, Cartier, Dior, Celine, Montblanc, Givenchy noChanel, ukubiza nje abambalwa.
Isifunda sezimboni saseSanta Croce sull'Arno, phakathi kweFlorence nePisa, ngenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zaseYurophu ukusikwa kwesikhumba. Isebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni izicathulo kanye nemikhiqizo yesikhumba futhi okuwukuphela kwesifunda esikhethekile sifaka lonke uchungechunge lokukhiqizwa kwesikhumba: ekusebenzeni, kusukela ekusukeni kwesikhumba kuya kumkhiqizo ophelile, ikakhulukazi izicathulo zezinyawo.
Ngokwendawo, isifunda sihlanganisa indawo engamakhilomitha-skwele angama-330, namabhizinisi amancane naphakathi. Umkhiqizo oyinhloko uphathelene nezimpahla zesikhumba, izicathulo kanye nezikhumba. Okuthokozisayo iqiniso lokuthi cishe ama-40% wokukhiqizwa okuphelele athunyelwa kwamanye amazwe.
Amagama amakhulu kanye nama-stylists babheka isifunda saseSanta Croce ukugcwala kwendalo yesikhumba. Ikusasa lesifunda namuhla ligxile ohlelweni lokuqeqeshwa nokucwaninga, ie izifundo zasenyuvesi, isikhungo sobuchwepheshe esenziwa ngamakhemikhali, kanye nesikhungo sobuchwepheshe sokusebenza kwesikhumba.
esihlokweni esanduleleesihlokweni esilandelayo
Isikhwama se-Matilde sonskin Beer
Vula isikhwama sesikhumba sikaTote
Isikhwama sesikhumba esingaguquki
Nguwe Kuphela Ozothola Okuphambili